Modely handrafetana triptych | Famoronana an-tserasera
Manuel Ramirez | | Graphic Design, dia midika hoe, Templates
Raha manomana ny famolavolana a triptych an-tserasera azo antoka fa ianao môdely tonga mora ampiasaina hitarihana anao. Ao no ahitanao izay rehetra ilainao hisorohana ny lesoka rehefa manonta azy io ary ambonin'izany rehetra izany mba hialana amin'ny fampitahorana sy fanitsiana minitra farany satria misy lahatsoratra na sary tsy ampoizinao tapaka.
Ny modely dia ao Endrika AI (Illustrator) ary manana tsipika aforitra ny triptych, faritra mandeha amin'ny rà, faritra fanontana, lahatsoratra fitarihana sns. Raha tsy misy isalasalana, raha mampiasa an'ity modely ity ianao amin'ny brochures dia afaka mamorona endrika ratsy ianao, fa ny lahatsoratra na ny sary dia tsy ho tapaka mihitsy.
Ao amin'ny rohy fampidinana avelanay anao eto ambany ianao dia hahita maodely brochures sy triptych marobe izay tena ilaina amin'ny fampielezana doka anao na hampiroborobo ny orinasanao
Ampidino | iombonana triptych an-tserasera
1 Inona no atao hoe triptych
2 Ahoana ny endrika triptych
3 Modely brochure alaina
3.1 Brochure momba ny fandraharahana
3.2 Triptych amin'ny manga ho an'ny flyers
3.3 Brochure momba ny asa lehibe - maintso
3.4 Ho an'ny orinasa amin'ny abstract - manga
3.5 Endrika Geometrika ho an'ny triptych
3.6 Modely Trifold maoderina
3.7 Triptych mavesatra
3.8 Bokikely fandraharahana amin'ny tanana
3.9 Volavola polygonal ho an'ny triptych
3.10 Triptych misy faribolana miloko
3.11 Bokikely matihanina
3.12 Triptych hexagonaly matihanina
3.13 Bokikely fivarotana matihanina
4 Tranonkala hanaovana triptych an-tserasera
Inona no atao hoe triptych
ny triptychs dia loharano tena ilaina amin'ny fampahafantarana tetikasa vaovao izay hivarotantsika serivisy na vokatra sasany. Raha ny marina dia mbola be mpampiasa izy io ary misaotra bebe kokoa amin'ireo modely mety ho hitantsika amin'ny Internet ka tsy mila mitady mpamorona hamoronana endrika manokana isika. Hasehonay anao hoe iza izy ireo ary ahoana ny fanamboarana azy ireo.
Ny fanaovana azy ireo anio dia mety ho toa handeha hiasa isika, saingy misy tranokala afaka manampy antsika hamorona endrika manokana raha tsy tiantsika ilay modely mety ho tonga mora raisina. ny endrika sary ho an'ny karazana vahaolana rehetra fa amin'ny hevitra rehetra ho omenay etsy ambany dia azo antoka fa hampifaly ny mpanjifanao ianao rehefa mangataka trippy aminao izy ireo. Ataovy.
Ny triptych dia brochure be mpampiasa amin'ny dokam-barotra ary mamela antsika, misaotra noho ny mivalona amin'ny faritra telo, asehoy ny fampahalalana rehetra ilainay amin'ny fampisehoana vokatra na serivisy an'ny orinasa iray. Amin'ny ankapobeny dia 297 x 210 mm ny habeny ary matetika dia fantatra amin'ny hoe A4.
Raha mila manana vokatra tadiavintsika isika asehoy ny fijerin'ny mpanjifa ny zavatra niainany, ny lisitra feno amin'ny antsipiriany ara-teknika sy ireo sary mampiseho ny antsipirian'ny vokatra na serivisy izay, ny triptych misy famaranana tsara dia mazàna manome fanatrehana tena tsara. Tsy ho an'ny sary fotsiny, fa ho an'ny fampahalalana rehetra mety ho ao anatiny.
Lojika, amin'ny ho brochure fampahalalana mivalona amin'ny faritra telo, Tsy ho mora vidy toy ny mahazatra izy io, fa noho ny antony lehibe sasany toy ny fihaonambe, mpandahateny, angon-drakitra fanokafana na fampisehoana ireo vahiny manokana dia iray amin'ireo endrika ampiasaina indrindra io.
Ahoana ny endrika triptych
Efa niresaka momba ny refy mahazatra isika miaraka amin'ny A4 sy ny 297 x 210 milimetatra. Saingy afaka miresaka momba ireo ampahany lehibe indrindra ao aminy koa isika. Toy ny amin'ny brochure rehetra, ny fonony no tena axis ary aiza no tokony hahalalantsika ny fomba cajole ny mpanjifa mety nandalo counter.
Afaka manao an'io fonony io isika apetraho ny teny filamatra na teny filamatra momba ny vokatra ary orinasa misy sary izay mamantatra haingana ny serivisy na ny vokatra. Izy io no toerana mety indrindra amin'ny sary famantarana ny orinasa ary miankina amin'ny modely azontsika aleha avy amin'ny endrika minimalist ka hatrany amin'ireo lamaody hafa lamaody misarika ny saina; tsy adino hatrany ny fiasa fototra an'ny triptych izay tsy maintsy ampifandraisina amin'ny orinasa na ny fampielezana dokambarotra na dokam-barotra.
Ny takelaka sisa tavela miaraka amin'ny endrik'izy ireo dia ahafahantsika mandinika ireo lafin-javatra izay heverinay ho manan-danja indrindra amin'ny orinasanay na ny vokatra. Raha trano fitahirizana divay no resahina dia azontsika atao izany farito ny toetra mampiavaka indrindra ny voaloboka voajinja ary ireo lafiny amin'ny fizotran'ny fanaovana labiera. Ny triptych dia ahafahantsika mampiseho amin'ny maso, ary koa amin'ny informatika, ireo andinindininy izay manome fampahalalana bebe kokoa.
Noho ny habaka izay ilain'ny triptych dia azontsika atao mampiasa sary lehibe toy ny azontsika atao ny milalao an'io endrika mitsangana kokoa io; hisy foana ny safidy amin'ny fampiasana sary maromaro izay rehefa nosokafana ilay brochure dia mamorona sary feno.
Zava-dehibe izany mampitombo ny fahalianana ny fampahalalana sy ny sary mpanjifa momba ny vokatray. Hatramin'ny inona ilay tavoahangy misy vera fenoina mba hampisehoana ny endriny sy ny lokony, mankany amin'ireo sarin'ny tanimboaloboka miaraka amina fotoana vitsivitsy amin'ny fanangonana sy famelabelarana. Ny dingana iray manontolo manomboka amin'ny voaloboka ka hatrany amin'ny vokatra farany dia azo angonina miaraka amin'ireo famiazam-boaloboka sy sary mampiseho ny asa-tanany.
La ravina farany azo navela hifandray, lisitry ny vahiny na sarintanin'ny faritra.
Modely brochure alaina
Izao ianao haneho modely maromaro izahay hahafahanao manana azy ireo efa alaina ary arak'izany amin'ny programa toa ny Adobe Photoshop. Azonao atao ny manamboatra azy ireo araka izay itiavanao azy ary manana triptych tena matihanina handaoana ny mpanjifanao ho faly tokoa.
Tsarovy izany efa manana lisitra CMYK ianao manonta. Ny fahazoan-dàlana tokana ho an'ny mpamorona no hany fahazoan-dàlana.
Brochure momba ny fandraharahana
Volavola maoderina miaraka amin'i endrika misintona amin'ny fiolahana sy ny endriny geometrika izay mamelombelona amin'ny fahitana azy voalohany. Bokikely hanambarana hetsika na fampisehoana marika iray misy habaka samihafa ho an'ny lahatsoratra sy sary masina. Aza adino fa tsy mila mitraka amin'ny mpamorona ianao rehefa mampiasa azy ara-barotra.
Rohy - marary mitsika
Triptych amin'ny manga ho an'ny flyers
Mampiavaka ity triptych ity ny tsipika diagonal azy ary ho an'io manga io izay no lasa protagoniste. Ireo trano dia manazava mazava ny anton'ny orinasa izay ahafahan'ny olona miresaka momba ny orinasa mpahay lalàna, mpanolo-tsaina isan-karazany na orinasa natokana ho an'ny fananganana na famolavolana habaka aza.
rohy: marary mitsika
Brochure momba ny asa lehibe - maintso
Triptych izay manalavitra azy amin'ny roa teo aloha izany maitso ary izany dia miaraka amin'ny maoderina ihany. Toerana malalaka ho an'ny sary famantarana ny orinasa sy andian-dahatsoratra hamaritana ny tanjon'izany, ary koa andiana fanambarana mba hazava ny serivisy na ny vokatra. Ny fahamatorana aterak'ity triptych ity dia mazava be.
Ho an'ny orinasa amin'ny abstract - manga
Triptych kanto iray hafa izay lasa miaraka amin'ny mpitantana, mpanolotsaina ary mpisolovava noho ny maha-matotra azy ary izy io dia samy maoderina avokoa noho ireo singa endriny samihafa. Tsy misy tsy fahampiana sary ihany koa hanehoana ireo tranoben'ny orinasa sy andiana "widget" hanehoana ny hevitra sy ny serivisy an'ny orinasa.
Endrika Geometrika ho an'ny triptych
Bokikely iray hafa ho an'ireo orinasa ao toerana maro no tadiavina lahatsoratra ary mety mila orinasa te-hiresaka mazava momba ny serivisy omeny ianao. Ny loko isan-karazany dia mamorona lamina manome fiainana sy dinamisme ho an'ny iray manontolo ary azo ampiasain'ny masoivohon'ny varotra na dokam-barotra.
Modely Trifold maoderina
Amin'ity triptych ity dia mandeha mivantana isika amin'ny fiainana ao an-tanàna manaraka miaraka amin'ireo tanjona teo aloha ihany. Izy ireo dia triptych maoderina kokoa ary misy antsipiriany sasany toy ny typography, ny loko ampiasaina ao amin'ny fanambarana ary ireo singa hita maso ireo dia mankasitraka ny lisitr'ireo ampahany manan-danja indrindra amin'ny serivisy na ireo tolo-kevitra naroson'ny masoivohon'ny dokam-barotra na marketing.
Ity triptych araho ny toro lalana etsy ambony na dia milalao gradient aza amin'ny loko manga somary tery sy andian-tsary izay mahatadidy fa ny fifandraisana an-tanàn-dehibe amin'ny masoivoho, mpisolovava, consultant ary maro hafa. Manaraka ny hatsarana mitovy amin'izany ihany izy ao amin'ireo fehintsoratra, na dia manamafy kokoa aza ny fiolahana sy ny lokon'ny loko. Triptych iray hafa koa raha te hanana kaonty maro karazana eo an-tanantsika ka manome vahaolana samihafa ho an'ny mpanjifa.
Bokikely fandraharahana amin'ny tanana
Eto ireo maherifo dia ny tanana hapetraka ho triptych azo ampiasaina tonga lafatra miaraka amin'ny tonon'ny fanabeazana. Tanana sariitatra be izay mampiseho ihany koa fa lafiny hafa tsy misy dikany amin'ny taranja marketing na drafitra amin'ny marketing amin'ny taona ho an'ny sekoly rehetra. Bokikely fampahalalana momba ny kalitao ary tena miavaka noho ireo tanana maneho hevitra ireo.
Volavola polygonal ho an'ny triptych
Misaotra matotra, kanto ary maoderina amin'ilay loko voafidy ao amin'ilay fanambarana ary ireo rafitra polygonal izay mamela toerana ho an'ny be pitsony. Azo ampiasaina amin'ny karazana matihanina rehetra izy io, na dia ho an'ny famoronana toa ny marketing sy ny dokam-barotra aza dia tsy nolokoina akory. Iray amin'ireo triptych miloko eto amin'ity lisitra ity mba tsy ho diso anjara ianao.
Triptych misy faribolana miloko
Ny loko no mahery fo ary koa ireo faribolana maro karazana ao amin'ity bokikely trifold fampahalalana ity. Izy io koa dia lalaovina miaraka amin'ny loko samihafa amin'ny fehezan-teny sy ny fahamendrehan'ireo faribolana ireo ihany avelao triptych miaraka amin'ny famaranana tena tsara. Madio sy madio amin'ny karazana vahaolana hafa ankoatry ny nampianarina hatreto.
rohy: rel = »nofollow» misintona
Mitovy amin'ny hafa ao amin'ny lisitra, fa miaraka amin'ny endrika miolikolika sy iny voasary iny izay mandray ny andraikitra voalohany ho kofehy iraisana izay mitarika ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny ampahany manan-danja indrindra amin'ny orinasanay na serivisy izay homenay.
Triptych hexagonaly matihanina
Toy ny eto ny hexagonal no mibaikoGreen dia mifehy ihany koa ireo singa hita maso sy ny lokon'ny lahatsoratra mba hamoronana firindrana mahafinaritra ho an'ireo izay mandray an'ity brochure ity.
Bokikely fivarotana matihanina
Triptych iray izay milalao karatra hafa ary ao no tsy misy ny tsy fahampian'ny sary sy ny loko misintona loko mafana. Aza very teoria loko hahafantatra ny anton'izany.
Tranonkala hanaovana triptych an-tserasera
Rohy: Brochure Canva
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Modely handrafetana triptychs
André dia hoy izy:
RENO ARO AMIN'NY PROGRAM Q NA AHOANA NO HANOKAFAKO IZAO Q Milaiko ho an'ny asa any am-pianarana aho ary avelako izy io ary mivoaka amin'ny endriny madio
Valio amin'i ANDRE
Hectorgonzales70 dia hoy izy:
Salama, salama, liana aho amin'ny fampidinana ny modely voalohany ampiasaina amin'ny famolavolana ny triptych ao amin'ny Illustrator izay rehefa manandrana misintona aho dia manome hadisoana amiko, azo antoka fa voafafa izany ary te-hangataka aminao aho amin'ilay sitraka hampiakatra azy indray , Vaovao aho amin'ity ary tena isan'andro miezaka ny hianatra bebe kokoa aho, manantena aho fa hanampy ny bilaoginao tsara.
Valiny ho an'i Hectorgonzales70
Angélica dia hoy izy:
AHOANA NO HAMOKATRA NY TRIPTYCHO AZY
Valiny amin'i ANGELICA
Fanentanana hanoherana ny fandaozana biby amin'ny fialan-tsasatra nataon'i Estudio Yinsen
Avadiho ho toy ny firaketana nomerika mahafinaritra ny sary an-taratasy